दुबईको सडकमा अलपत्र नेपाली युवाले रुँदै फोन गरे, बिचरा! उनको यस्तो कुरा सुन्दा कस्को मन रुदैन होला! (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
बैदेशिक रोजगारीमा गएको ५ महिना वित्दासमेत एजेन्टले काम नमिलाईदिँदा यतिबेला विदेशी भूमीमा अलपत्र परेका छन । उनलाई स्वदेश फर्काउन माग गर्दा समेत सूर्य राजवंशीले आलटाल गरेको पीडित परिवारले आरोप लगाएको छ। आखिर सत्य कुरा के हो ? कसरी यस्तो अवस्था आयो त यो परिवारमा ? विदेशबाट पिडितले रुँदै फोन गरेर आफुले यस्तोसम्म दुःख पाएको भन्दै अब आ’त्मह’त्या गर्छु भनेपछि श्रीमती रुँदै मिडियामा आएकी थिईन । उनले रुँदै यस्तोसम्म सुनाइएकी थिईन कि सुनेर सवै भाबुक वनेका थिए । अहिले ती बिदेशमा अलपत्र वनेका नेपाली युवाले रुँदै फोन गरेका छन । अहिलेको उनको अवस्था रूँदै रूँदै यसरी सुनाए तल भिडियोमा हेर्नुहोला सबैको मन रुनेछ ।